Ku Xigeenka Maayarka Hargeysa Oo Maayar Jiciir Ku Eedeeyey Xashiishka Buux Dhaafiyay Magaalada Iyo Wax Qabad La’aanta Golaha Deegaanka Kuna Tilmaamay Nin Qabyaaladdu Madax Martay | FooreNews
Home wararka Ku Xigeenka Maayarka Hargeysa Oo Maayar Jiciir Ku Eedeeyey Xashiishka Buux Dhaafiyay Magaalada Iyo Wax Qabad La’aanta Golaha Deegaanka Kuna Tilmaamay Nin Qabyaaladdu Madax Martay
Ku Xigeenka Maayarka Hargeysa Oo Maayar Jiciir Ku Eedeeyey Xashiishka Buux Dhaafiyay Magaalada Iyo Wax Qabad La’aanta Golaha Deegaanka Kuna Tilmaamay Nin Qabyaaladdu Madax Martay
“Haddii Aanu Garanayno Meel Qabyaaladda Lagaga Cuudiyo Waanu Ka Cuudin Lahayn”
Hargaysa (Foore)- Maayar ku xigeenka Caasimadda Hargaysa Md. Maxamed Cabdilaahi Uurcadde ayaa jawaab ka bixiyay hadalo uu maayarka caasimadda Hargeysa Inj: Xuseen Maxamuud Jiciir saxaafadda hore ugu baahiyay iyo warar sheegaya in Maayarka Hargaysi dhimay awooddihii uu lahaa qaarkood. Maayar Ku xigeenka ayaa sidan ku sheegay shir jaraa’id oo uu shalay ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa.
Maxamed Cabdilaahi Uurcadde, Ku xigeenka Golaha deegaanka Hargeysa ahna maayar ku xigeenku waxa uu sheegay in uu aad ula yaabay waraysi uu Maayar Jiciir siiyay wargeyska Jamhuuriya bishan 28keedii, kaasi oo uu ku tilmaamay wax aan macno lahayn. Isaga oo dhalliil weyn u soo jeediyay maayarka Hargeysa oo uu ku tilmaamay nin qabyaaladiiste ah oo aan lahayn wax qabad iyo awood toona, maalin walbana reerkiisa kula shira xafiiskiisa. Ku Xigeenka Maayarka Hargeysa oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Waxa naga yaabiyay maayarka oo waraysi siiyay Wargayska Jamhuuriya 28/11/2011, runtii arrintaasi aadbay nooga yaabisay, waxaan u arkaa in ay ka baxsan yahay xilkii uu hayay. Waxaa uu ka hadlay dhawr qodob oo kala ah; Jidka dawga cad ee isku xidha Hargaysa Ilaa Jabuuti oo dadwaynaha Reer Somaliland ay tabaruc ku dhisayaan oo guddida wadadaasi ay dawladda hoose ee Hargaysa u yimaadeen kana codsadeen in ay kaalintooda ka qaatan, arrintaasi oo si masuuliyadda ka baxsan uu uga hadlay dadkuna ay markhaati ka yihiin. Guddidu markii ay u yimaaden maayarka waxa uu sheegay in aanu wax war ah u haynin laakin uu u kireeyay laba cagaf, hawshana uu sidaa ku dhameeyay. Arrintaana waxaan leeyahay wax Alla wax ka jiraa ma jiraan waana mid aan sal iyo raad toona lahayn. Malaha taasi waa mid isaga u gaar ah, waxaad moodaa marka uu sidan leeyahay in uu Kambala joogo. Waxaan Uga jeedaa guddidu way yimaaden oo waxaa yimid Cabdiqaadir Xaashi oo ah guddoomiyaha guddida, waxaanu yidhi cagaf ha naloo kireeyo, cagaftii markii ay maalin joogtay lacagtii ayaa loo wayay dabadeed aniga ayaa la soo hadlay maayarka waxaanan u sheegay arrintaasi, waxaanu yidhi waad i xasuusisay. Sidaasaanu ku dhoofay” Ayuu yidhi Maayar Xigeenka Hargaysa, isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa ku daray: “Arrinta Dawga Cad waxaa si wada jir ah uga hawl galay Xoghayaha dawladda Hoose iyo Agaasimayaasha waaxyaha dawladda Hoose. sidaa darteed waxaan Ummadda u sheegaynaa in maayarku hurday oo uu soo baraarugay. Aadna waxaan Uga xumahay waxaanu lahayn in uu ku faano. Ilaa dhawr Kiiloo mitir ayaanu halkaasi ka samaynay isna habeenkii uu yimidba waxa uu cagaftii ka soo saaray hawshii ay haysay. Cagaftu hawsha ay haysaa maaha mid isaga laga baryayo ee waa mid dawladda dhexe iyo dadwanaha Reer Somaliland oo dhami ay iskugu tageen. Waa waddo qaran waxaanan digniin ku siinaynaa in uu talaabadaa dib uga noqdo, waxa meesha loo dhigay ee ay ummaddu cashuurta ugu dhiibtaa waa in Ummada wax loogu qabto, wuxuu isagu leeyahay maaha. Waxan aanu haynaa waa xoolo ummadeed”.
Ku xigeenka Maayarka Hargaysa Maxamed Cabdilaahi Uur Cadde waxa uu Maayarkiisa ku eedeeyey masuuliyad darrada cagafyada dawladda hoose ee geerashyada ku caddilan iyo in uu mid u kireeyo hawlaha la qabanayo, taasi oo uu ku tilmaamay mid nasiib darro ah.
Dhinaca kale ku xigeenka Maayarka Hargeysi waxa uu ka hadlay arrinta dhulka oo la sheegay in uu xilkeedii Maayarku isaga ka wareejiyay waxaanu yidhi: “Arrinta dhinaca dhulka maamul hayddii ay tahay iyo haddii ay tahay naqshadba isagay gacanta ugu jirtaa. Cid Xil u haysayna ma jirto. Xataa naqshadaha dhulku waxa ay ku jiraan gacanta xoghayntiisa badhna gurigiisa ayay yaallaan. Haddii uu sharciga Ixtiraami waayo Jiciir wax ka badan noqon maayo. Waxa uu sheegay in ay 13 xildhibaan u soo jeediyeen in uu dhulka iga qaado laakiin, waxaan idiin sheegayaa in ay tani tahay waraaq ay ku qoran tahay qoraal ay xildhibaanadu soo jeediyeen in ay magaaladii urtay oo Xashiishkii meel kasta tuulan yahay”
Ugu dambayn Ku xigeenka Maayarka Hargeysa waxa uu Maayarka ku eedeeyey hawlo qablaayadeed iyo in uu si badheedh ah ugu dhaqmo qabyaalad uu ku tilmaamay in uu saar qabiil hayo. Isaga oo arrintaa ka hadlaya waxa uu yidhi: “Maayar Jiciir, waxan hayaa waa Saar qabiil, anigu waxaan ahaan jiray xisbiga UCID oo waatii la is qabsaday, xisbigaana wax ka galay ma jirto. Waxaan ka warqabnaa oo la hayaa maalin kasta waxaa uu golaha deeganka u qaybiyaa Beelo. Wuxuu halkaasi kula shiraa Beeshiisa.
Hadddii aanu garanayno Meel lagaga Cuudiyo, waanu kaa cuudin lahayn, laakin nasiib darro ma garanayo, runtii arrinta uu ka cadhaysanyahay, waatan aan idiin sheegay oo waa tu shakhsiya. Ina Cali Waraabena isma haysano oo Maxkamadda ayuu u gudbiyay Arrintii Wakiilada ka baxay xisbigiisa, Taasi wax isaga ka khuseeyaa ma jirto. Waddadii Xaraf wali halkii ayay taagan tahay. Waddada Boqol iyo kontonka waad Aragteen oo dadkii waxay taagan yihiin waar bal ciiddan uun ayaa naga qaada. Wax kale saxeexa ulama uu tagin ee waxaa uu ula tagay dhallinta kacaanka oo la rarayay iyo boqol iyo kotonka oo 17qof laga rarayay taasina wax isaga laga baryayo maaha”.
Previous PostBerbera Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Wafti Hogaaminayey Guddoomiyaha Urur-Siyaasadeedka WADANI Next PostWasiirul Dawlaha Khaarajiga Oo Shir Muhiima Somaliland Uga Galay Qatar